Mark Gurman wuxuu sharxayaa "waqtiga" la filayo inuu soo afjaro kala -guurka Apple Silicon | Waxaan ka imid mac
Mark Gurman wuxuu sharxayaa "waqtiga" la filayo inuu dhammaystiro ku -meelgaarka Apple Silicon
Tan iyo markii Craig Federighi u soo bandhigtay mashruuca Apple Silicon adduunka oo dhan, laga soo bilaabo qaybta hoose ee Apple Park, shirkaddu waxay si hagar la’aan ah u shaqeyneysaa si ay u dhammaystirto yoolkeeda. Shaki la'aanna way fulin doontaa, iyadoo la arkayo xawaaraha socdaalka ee mashruuca la sheegay inuu qaadanayo.
Mid ka mid ah isbeddellada ugu muhiimsan ee dhammaan taariikhda Apple. In dhammaan kombiyuutarada ay shirkaddu iibiso ay joojiyaan qaadista processor -rada Intel, una wareegaan kuwa cusub Qalabka ARM loogu talagalay Apple, sida caanka ah ee hore loo yaqaan M1. Markii ay Mac -yada ugu horreeya ku soo bandhigeen processor -kan, shirkaddu waxay noo xaqiijisay in laba sano gudahood dhammaan isbeddelka buug -yaraha kombiyuutarkeeda la dhammaystiri doono.
Mark Gurman kaliya lagu daabacay baloogiisii ​​caanka ahaa Bloomberg ujeeddooyinka ay Apple ka leedahay mashruucan Silicon -ka Apple. Markii ay shirkaddu si lama filaan ah u soo bandhigtay mashruuca WWDC20, sannad ka hor, Federighi wuxuu noo sharraxay in isbeddelkan dhammaan Apple Macs laga bilaabo Intel illaa ARM lagu dhammayn doono laba sano gudahood.
Dhammaan ARM -yada Mac -yada ee Noofambar 2022
Gurman ayaa hadda xaqiijiyay in «waqtiga«. Waxay ahayd sannad tan iyo markaas, oo processor-ka M1 ayaa durba ku jira heerka gelitaanka MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air, iyo 24-inji iMac. Moodooyinkii ugu horreeyay waxaa la bilaabay Nofembar 2020, sidaa darteed weli waxaa jira waqti illaa Noofambar 2022 oo Apple ay ku bixin karto ballanqaadkeeda.
Wuxuu sidoo kale ku sharraxayaa balooggiisa in MacBook Pros cusub oo leh soo-saareyaal cusub “M1X” la sii deyn doono bilaha soo socda, oo ay ku xigi doonto Mac mini-dhammaadka sare. Ka tag 2022 waxa sugaya shirkadda si ay u dhammayso isbeddelka: iMac ka weyn kan hadda ah 24-inji, iyo ugu dambayntii Mac Pro cusub oo leh Kaaliyaha sare ee ARM.
Maaddaama Mac Pro uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee u hayaama Apple Silicon, Gurman wuxuu tilmaamayaa in shirkaddu ay hadda cusboonaysiin doonto moodalka hadda jira ee wali leh processor -ka Intel, gaar ahaan Intel Ice Lake Xeon W-3300.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mark Gurman wuxuu sharxayaa "waqtiga" la filayo inuu dhammaystiro ku -meelgaarka Apple Silicon
Kani waa kiisaska cusub ee xadhigga Vica ee iPhone -kaaga